Maamulka Jubbaland oo sheegay in Al Shabab ay Hareereyen Deeganada Ay maamulan – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maamulka Jubbaland oo sheegay in Al Shabab ay Hareereyen Deeganada Ay maamulan
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) oo wareysi gaar ah siiyay Wakaalada Wararka Reuters ayaa sheegay in Xildhibanada Baarlamaanka midkan ku xiga aysan soo xuli doonin Odayaal dhaqameyd uu sheegay inuu soo xushay Madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud.
Axmed Madoobe waxa uu shaaciyay in Xildhibaanada badeli doona kuwa hadda shaqeeya ay soo xuli doonan Hogaamieyaasha Gobolada dalka.
Baarlamaanka Soomaaliya waxa soo xulay Odayaal dhaqameyd iyagana waxa ay 2012 soo doorten Madaxweynaha Xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Xasan sheikh maxamuud waxa uu ku hanjabay in Dowladiisa ay qaban doonto si kastaba Doorasho bisha Augusto Ee Sanadka dambe balse waxa meesha ka baxay Hanaankii Rajada badan laga qabay ee ahaa in qof kasta uu codkiisa dhiibto.
Axmed Madoobe waxa uu Reuters u sheegayin Soomaaliya ay imminka leedahay Dowlad Federaal ah iyo Maamul goboleedyo Dalka jira sidas awgeyd ay tahay iney iyaga Hogaamiyeyaal ahaan ay soo doortan Xildhibaanada soo socda.
Waxa uu intaasi ku daray in isaga aysan la ahayn in Odoyaal dhaqamed ay soo xulaan Xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya Ee Sanadka soo socda 2016ka.
Dhinaca kale Madaxweynaha Jubbaland waxa uu sheegay inAl Shabab ay hareereyen maamulkiisa ayna u baahan yihiin Taageero ay kula dagaalaman Al Shabab.
Axmed Madoobe ayaa sheegay iney u baahan yihiin Maalgelin,Qalab military,Mashaariic horumarin iyo Mushaaradka Ciidamada Maamulka Jubbaland.
Dhageyso: warka Duhurnimo Ee Radio Dalsan ,21-08-2015